Xijaar oo waji-gabax kala kulmay Aadan Madoobe! | KEYDMEDIA ENGLISH
Xijaar oo waji-gabax kala kulmay Aadan Madoobe!
Xijaar, wuxuu hore is hor istaag bareer ah ku sameeyay dhaarinta Xildhibaannada Golaha Shacbka ee laga soo doortay Ceel-waaq, halka uu jid-gooyo u dhigtay Xildhibaannada Aqalka hoose oo dhan, si aan loo dooran Guddoonka Golaha shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka JFS, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa kor yimid qorshe amniga doorashooyinka la xariiray oo uu waday Taliyaha Booliska, Cabdi Xasan Xijaar oo ku daaban Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo maalmo kadib banneyn doona Villa Somalia.
Sida ay Keydmedia Online ogaatay, Xijaar, ayaa Aadan Madoobe, ula tagay qorshe uu ku doonayo in fariisimaha Ciidanka ATMIS, ku leeyihiin bar-koontaroollada, goobta ay ka dhacayso doorashada Madaxweynaha [Teendhada Afisyooni] lagu wareejiyo ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya, hayeeshee, Guddoomiye Madoobe ayaa ku gacan seyray.
Kulanka Taliyaha Booliska iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka, ayaa ahaa mid aan saxaafadda loo soo bandhigin, hayeeshee, xoguhu waxa ay sheegayaan in labada dhinac isku fahmi waayeen qorshaha uu waday Xijaar, kaas oo la rumeysan yahay inuu fulinayo amar Farmaajo oo u jeedkiisu yahay in amniga doorashada la carqaladeeyo.
Axaddii, Sheekh Aadan Madoobe ayaa go'aan kama dambeys ah ka gaarey doorashada Xildhibaannada Garahaarey iyo Ceel-waaq oo beryahan dood ka taagnayd, u jeedka qorshaha Xijaar, ayaana ah in ciidankiisu xareeyaan 16 shaqsi oo sheeganaya in ay ka soo baxeen Garbahaarrey, yeelkeede, uu Aadan Madoobe, waxba kama jiraan kasoo qaaday.
Intaas kadib, Guddoomiyaha Golaha Shacabka, wuxuu xalay kulan deg deg ah la qaatay, saraakiisha sare ee ciidanka Howlgalka Nabad ilaalinta ATMIS oo ay ka mid yihiin Ku-xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya, marwo Fiona Lortan iyo Taliyaha Guud ee Ciidanka ATMIS ee Soomaaliya Lt. Gen Ndegeya Diomede.
Sidoo kale, waxaa kulankaas, qeyb ka ahaa, Brig. Gen. Keith Katungi oo ah Taliyaha Guud ee qaybta Sector One ee ciidanka ATMIS, oo ah kuwa ilaaliya xarumaha muhiimka ah ee Dowladda Federaalka, waxaana kulanka looga hadlay xaqiijinta amniga dooraashada, Guddoomiye Madoobe, ayaana amar ku siiyay inay gutaan waajibaadkooda shaqo iyo mas’uuliyadda ka saaran ilaalinta Amniga doorashada Madaxweynaha 15-ka May.
26 April 2022, Taliyaha ciidanka Booliska, Xijaar iyo askar ka socotay Madaxtooyada Soomaaliya, ay weerar ku qaaday xarunta Golaha Shacabka Villa Hargeysa, markaasoo lagu howllanaa doorashadii Guddoonka Golaha Shacabka, xilli uu maalin ka hor is istaag ku sameeyay dhaarinta Xildhibaanno watay aqoonsiyada Guddiga Doorashooyinka.